सिद्यार्थ नगरपालिकाको विपत व्यवस्थापन समितीको बैठक सम्पन्न – Dainik Lumbini
सिद्यार्थ नगरपालिकाको विपत व्यवस्थापन समितीको बैठक सम्पन्न
भैरहवा । नोभल कोरोना भाइरस (कोभिड १९ ) को संक्रमण फैलिन नदिन सिद्धार्थ नगर पालिका भैरहवाले गठन गरेको विपत व्यवस्थापन समितीको बैठक सम्पन्न भएको छ ।
नगर प्रमुख हरि प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकमा सहभागीहरुले राहत वितरणलाई एकद्वारबाट गराउन नगरपालिका सक्रिय हुने बताइएको छ । बैठकमा उद्योग व्यपार संगठनका अध्यक्ष नारयण प्रसाद भन्डारीले विपत व्यवस्थापन समितीले बारम्बार आफुखुसी राहत नबाड्न आग्रह गर्दागर्दै पनि गर्दै केही संघसंस्थाले आफुखुसी राहत बाडिरहेको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरे । उनले भने, ‘यो विपतको बेला पनि किन केहि व्यक्ति तथा संस्थाहरुले मजाक गरिरहेका छन् ? के उनीहरुले नगरपालिकाको समानान्तर सरकार चलाउन खोज्या हुन् ?
अध्यक्ष भन्डारीले राहत दिन इच्छूूकहरुले नगर पालिकामा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सामाजिक दूरीको बेवास्ता गर्दै मनपरी गरिरहेकोले तत्काल कानून अनुसार त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाहि गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद शर्माले यतिबेला सबै उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई सहयोग गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘यो महाविपत्तिको समय हो । यतिबेला नाफा फाइदा नहेरी हामीहरु सबै राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्दछ । राज्यले घोषणा गरेको लकडाउनको पुर्ण पालना गर्नुपर्दछ । ’
शर्माले सुरक्षा सतर्कता सहित खाद्यान्नका गाडीहरु आउने बातवरण भने जरुरी रहेको उनले बताए ।
बैठकमा सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष कुल प्रसाद न्यौपानले बिहान सांझ पसल खोल्दा मान्छेहरुको भीड बढेकोले खाद्यान्न, डेरी, तरकारीको पसल दिउंसो खोल्दा ठीक हुने बताए । उनले राहत दिने संघसंस्थाले नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पनि बताए ।
नेपाल बैंकर्स एशोसियनका अध्यक्ष रामराज उपाध्ययले यतिबेला भीडभाड हुने ठाउहरुको पहिचान गरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी रहेको बताए । उनले राहत लिनेहरुको पहिचानमा वडाका सदस्यहरुलाई बढी जिम्मेवार गराउनुपर्ने बताए ।
सो अवसरमा लुम्बिनी प्रेस क्लबका संस्थापक अध्यक्ष माधब ढुंगानाले लकडाउन कार्यन्वयन, राहत बितरण र बजारको सम्बन्धमा तत्काल अनुगमन जरुरी रहेको बताए ।
नेपाल रेडक्रसका प्रतिनिधी सन्जिब शर्मा रेग्मीले क्वारेन्टाइनमा थप गर्नुपर्ने बताउदैं नगरमा कल सेन्टरको स्थापना जरुरी रहेको बताए । गैरसरकारी संस्थाको प्रतिनिधी समीता मल्लले लकडाउनको कायन्वयनमा अझै कडाई गर्नुपर्ने बताईन् ।
सो अवसरमा वडाध्यक्षहरुले वडाले बाडेको राहतमा गरिब मान्छे नभएर मेरो मान्छे परेन भन्नेहरुले अनावश्यक विरोध गरिरहेको बताए । सिनपा ९ का वडाध्यक्ष शेषकान्त भन्डारी, ८ का अध्यक्ष राजनजंग राणा, ३ का अध्यक्ष थानेश्वर पौडेल, २ का अध्यक्ष दीपक थापा, ११ का अध्यक्ष दीलिप यादव, १० का अध्यक्ष विजय धवल, ५ का अध्यक्ष चेत बहादुर क्षेत्री, ७ का अध्यक्ष भीमसेन कर्माचार्यले वडाले गरिब तथा विपन्नको अभिलेख संकलन गरिरहेको बताउदैं उक्त कार्यमा सबैको सहयोग जरुरी रहेको बताए ।
बैठकमा नगर उपप्रमुख उमा काफ्लेले नगरपालिकाले १७४२ जना गरिब, श्रमीक र असहायलाई वडा वडामा पुगेर एक चरणको राहत बितरण गरिसकेको बताइन् । उनले भनिन, ‘सिद्धार्थनगरमा बसोबास गर्ने जो सुकै जहासुकैको भएता पनि हामीले राहत दिनुपर्ने हुन्छ । सोहि अनुसार नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ । ’
बैठकमा नगर प्रमुख हरि प्रसाद अधिकारीले कोरोना जस्तो महाविपत्तिको विरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्नु पर्ने बेला केहीकेहीले अनावश्यक टिप्पणी गर्नु दुखद भएको बताए । उनले भने, ‘यो समय सबै बिचार, आस्था र विमतिलाई केहि समय टाढा राखेर कोरोना विरुद्ध एक हुने समय हो । ’
नगर प्रमुख अधिकारीले सिद्धार्थनगरपालिका गरिब, असाहय र श्रमीकलाई कुनै कमि नहोस् भनेर दिनरात खटिरहेको समेत बताए ।
सो अवसरमा समाजसेवि नारयण प्रसाद अग्रवालले गरिब र विपन्न जो कोहि, जहासुकैको भएता पनि राहत दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यतिबेला सबै राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था, नागरिक समाज, मिडीया सबै एक भएर सरकारलाइ सघाउनुपर्छ । ’
बैठकमा भारतीय तरकारीलाई पुर्ण रुपमा रोक लगाएको भएता पनि चोरी तस्करी गरेर भित्रीरहेको सूचना प्राप्त भएकोले तरकारीसंगै कोरोना भित्रीने जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सीमामा सुरक्षा तैनाथी र कडाई अझै जरुरी रहेको बताइएको छ ।
सो अवसरमा सिद्धार्थनगर पालिका विपत व्यवस्थापन कोषमा एक करोड दस लाख रुपैया संकलन भईसकेको विपत व्यवस्थापन समितीका सदस्यसचिव ईन्जिनियर यमलाल पान्डेले बताए । पान्डेका अनुसार कृषकहरुलाई खेति स्याहार्ने कार्यका लागि मेशिनहरु प्रयोग गर्न वडा कार्यालय, नगरकार्यपालिकाबाट सहज अनुमतिको व्यवस्था मिलाइएको तथा नगरपालिकामा रहेको भिम अस्पतालमा प्रदेश सरकारबाट हाल ३५ बेडको क्षमताको कोरोना उपचार कक्ष निर्माण भइरहेको र हालसम्म २७ बेड तयार भएको सो मध्ये ५ वेडको आइ सि यु सेन्टर स्थापना भएको समेत बताए ।
सबैभन्दा बढी कावासोतीको, कम बौदीकालीको
९७ हजार नाघे सक्रिय संक्रमित, एकै दिन दुई सय २५ जनाको मृत्यु
लकडाउनमा होटल सञ्चालन